၎င်းသည် Samsung Fit လက်ဆောင်အသစ်ဖြစ်သော Galaxy Fit ဖြစ်သည် Gadget သတင်း
၎င်းသည် Samsung Fit လက်ဆောင်အသစ်ဖြစ်သော Galaxy Fit ဖြစ်သည်
Jose Rubio | | Wearable devices များ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Samsung ကဒီအားသာချက်ကိုယူပြီး unpacked ဖြစ်ရပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ high-end ဖုန်းအသစ်တွေအပြင်၊ က galaxy S10 နှင့် က galaxy ခေါက်, ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ် စတင်ခဲ့သည် ထို့အပြင်အဖြစ်လူသိများအပိုဆောင်းထုတ်ကုန်များ၏နံပါတ် ။ ။။ အထက်ဖော်ပြပါစမတ်ဖုန်းနှင့်၎င်း၏စမတ်နာရီသစ်နှင့်အတူ Galaxy Active, Galaxy Fit နှင့် Galaxy Fite၏လှုပ်ရှားမှုလက်ကောက်အသစ်များကိုတင်ပြခဲ့သည်။
Galaxy Active နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ပွဲမတိုင်မီတွင်အချို့သောယိုစိမ့်မှုများရှိခဲ့သော်လည်း၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Unpacked ၌တွေ့ရှိရမည့်အရာကိုမျှော်လင့်ချက်ဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း Galaxy Fit ၏အခြေအနေမှာကွဲပြားခြားနားသည်၊ အကြောင်းမှာ လက်တွေ့ကျကျဘယ်သူမှမျှော်လင့်မထားတဲ့စက်ကိရိယာအဘယျသို့အဘို့အလာပါတယ် ဂီယာအကွာအဝေးကိုအစားထိုးလိုက်ပါ, ယခုအချိန်တွင် Galaxy အကွာအဝေးအတွင်းရှိအားလုံးဝတ်ဆင်နိုင်သောပေါင်းစည်း။
1 Galaxy Fit ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
2 Galaxy Fit နှိုင်းယှဉ်မှုဇယား
3 Galaxy အကွာအဝေးတစ်ခုအပြင်
Galaxy Fit ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Galaxy Fit ၏အကွာအဝေးအသစ်အတွင်း၌၎င်းနှင့်အတူတူပင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည် Samgung Galaxy S10တစ်ဦး ရိုးရှင်းသောဗားရှင်းကိုသတ်မှတ်ထားသော nomenclature အသစ် ထုတ်ကုန်၏။ ဒါကအပြင်၌တည်ရှိ၏ က galaxy Fit, Galaxy Fit အီး.
ခြားနားချက်များ ဗားရှင်းနှစ်ခုအကြား အဓိကအားဖြင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအိပ်ရကြ၏ဖြစ်လျက်ရှိ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင် Galaxy Fit တွင်တွေ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအမြင်ကွဲပြားမှုတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းတွေ့နိုင်သည် မူကွဲနှစ်ခုလုံးအကြားကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အကွာအဝေး Samsung လက်ကောက်၏အကြားကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်း စံမော်ဒယ်အတွက်အနက်ရောင်နှင့်ငွေရွေးချယ်စရာမှချဲ့ထွင်နေစဉ်, အနက်၊ အဖြူနှင့်အဝါရောင်သည်စျေးအသက်သာဆုံးပုံစံဖြစ်သည်ပိုပြီးအားကစားနဲ့အလွတ်သဘောပုံစံကိုပေးတာပါ။
ဒါပေမယ့်တစ်နေရာရာမှာသူတို့ဟာကုန်ပစ္စည်းကိုဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ရောင်းနိုင်ဖို့တစ်နေရာရာကိုဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။ Galaxy Fite၏အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖန်သားပြင်အပြင်အောက်ပါနှိုင်းယှဉ်မှုဇယားတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည် အနိမ့် pixel သိပ်သည်းဆ။ ဒီလိုသေးငယ်တဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကဒါမျိုးဟာစမတ်ဖုန်းပေါ်မှာရှိသလောက်အရေးမကြီးပေမယ့်အသေးစိတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာပင် RAM ၏ကွာခြားမှုမှာ Galaxy Fit နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Galaxy Fit နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လေးဆမြင့်တက်သွားသည် ဘက်ထရီကို ၅၀% နီးပါးလျှော့ချနိုင်သည် ဒီနောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်ရောက်ရှိလာ တစ်ပါတ်အထိ အကောင်းဆုံးမှာဝန်နှင့်ဝန်အကြား။
Galaxy Fit နှိုင်းယှဉ်မှုဇယား
က galaxy Fit
Galaxy Fit အီး
အရောင် အနက်ရောင် - ငွေရောင် အနက်ရောင် - အဖြူရောင် - အဝါရောင်
ဖန်သားပြင် 0.95 "အပြည့်အဝအရောင် AMOLED 0.74 "PMOLED
resolution ကို 120 x ကို 240 - 282 ppi 64 x ကို 128 - 193 ppi
Processor ကို MCU Cortex M33F 96MHz + M0 16 MHZ MCU Cortex M0 96MHz
အရွယ် 18.3 44.6 11.2 မီလီမီတာ 16.0 40.2 10.9 မီလီမီတာ
သိုင်းကြိုးနှင့်အတူအလေးချိန် 24 ဂရမ် 15 ဂရမ်
ရမ် 512 KB + 2048 KB 128 KB
သိုလှောင်မှု 32 MB ROM4MB ROM
ဘက်ထရီ 120 mAh ဘက်ထရီ 70 mAh ဘက်ထရီ
အာရုံခံကိရိယာ သွေးခုန်နှုန်း + Accelerometer + Gyroscope Pulse + Accelerometer
Carga ကြိုးမဲ့ NFC ကို တော့ Pogo
ခုခံခြင်း 5ATM Mil STD 810G 5ATM Mil STD 810G
Samsung Gear Fit နှင့် Gear Fit2နှင့်မတူသည် Galaxy Fit မှာမျက်နှာပြင်အပြားရှိတယ်၎င်း၏ယခင်၏ကွေးမျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှထွက်ခွာ။ ဒီဒီဇိုင်းဒြပ်စင်နှင့်အတူ ရိုးရှင်းစွာအနိုင်ရ ထို့အပြင်သုံးစွဲသူများသည်မည်သည့်ဗားရှင်းကိုမဆိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဆိုပါကကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။
Xiaomi Mi Band လှုပ်ရှားမှုလက်ကောက်နှင့်ဘုရင်လက်ထက်တွင်ပြိုင်ဘက်အသစ်နှင့်အတူ Samsung က၎င်း၏နယ်ပယ်ဈေးကွက်ကိုထပ်မံချဲ့ထွင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအာမခံချက်ရှိသည့်ထုတ်ကုန်ကိုရောင်းချခြင်းသည် Galaxy ထုတ်ကုန်များ၏ကျန်အပိုင်းများတွင်ကဲ့သို့မလောက်မများဝယ်ယူသူများအတွက် ၀ ယ်ယူရန်ငွေပိုမိုသုံးစွဲရန်မတတ်နိုင်သူများသို့မဟုတ်ရှာဖွေနေသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ တစ်စီးရီးသည် smartwatch ကမ်းလှမ်းမှုများထက်ပိုမိုရိုးရှင်းသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များအသစ်ကလိုပဲ Galaxy Active
သံသယဖြစ်စရာမရှိသော်လည်း Galaxy Fit သည် အားကစားလေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းအခြေခံစောင့်ကြည့်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစီ၏မှတ်တမ်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကောက်ကိုသတ်မှတ်ရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်မလိုပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်လည်းနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုစစ်ဆေးပါဤကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန်အကြံပေးချက်များ.
သော်လည်း တရား ၀ င်ဈေးနှုန်းကို Samsung အတည်ပြုရသေးXiaomi Mi Band ၏အဓိကပြိုင်ဘက်နှင့်လက်ရှိ Gear Fit 30 ကုန်ကျစရိတ်မှာယူရို ၁၃၀ ကျော်၏ဈေးနှုန်းမှာယူရို ၃၀ ခန့်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ရောင်းချမည့်နေ့ကိုအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါ။၎င်းသည်လာမည့်မတ်လ ၈ ရက်တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဟုစဉ်းစားခြင်းသည်မဆင်ခြင်နိုင်သော်လည်း Galaxy မိသားစု၏စမတ်နာရီသစ်ဖြစ်သည့် Galaxy Active နှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။
မကြာမီဖြစ်နိုင်သည်အတိုင်းပြုလုပ်ပါ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် Galaxy မိသားစုကြီးထွားလာလိမ့်မည်, နှင့် Galaxy Fit သစ်နှင့်၎င်း၏ရိုးရှင်းသောဗားရှင်းဖြစ်သော Galaxy Fiteတို့သည် ၀ ယ်သူများအကြားတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အကျယ်ပြန့်ဆုံးမော်ဒယ်များဖြစ်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သံသယမရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ၎င်းသည် Samsung Fit လက်ဆောင်အသစ်ဖြစ်သော Galaxy Fit ဖြစ်သည်
Galaxy S10, S10 + နှင့် S10e ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
Samsung Galaxy Buds Bluetooth နားကြပ်အသစ်နှင့်တွေ့ဆုံပါ